Ukuvuma ityala - Admission of guilt
Le ncwadana yenziwe ngenjongo yokuba kucaciswe iziphumo ezibakho xa umntu
Ehlawuliswa imali ngenxa yokwaphula umthetho. Inika namacebiso angezomthetho aluncedo xa abantu bebanjiwe baza bachazelwa ukuba mabahlawule imali ngenxa yetyala abalenzileyo.
Iyintoni Intlawulo Yolwaphulo-Mthetho?
ISebe Lamapolisa laseMzantsi Afrika (South African Police Service) lisenokucela umntu obanjiweyo kuba erhanelwa ngolwaphulo-mthetho olungephi ukuba akhuphe intlawulo yolwaphulo-mthetho. Le ndlela iyinxalenye yenkqubo yezomthetho yeli lizwe, yaye ibonisa ubani ukuba uyavuma ukuba lukhona ulwaphulo-mthetho olungephi alwenzileyo kungakhange kufuneke ayokuma phambi kwejaji. Le ndlela ikwanciphisa umthwalo omkhulu weenkundla zamatyala. Ikwayindlela ekhawulezileyo yokusombulula amatyala angephi avunywa ngabantu ukuba bawenzile.
Noko ke, abantu abaninzi bayayikhupha intlawulo yolwaphulo-mthetho ukuze nje bakhutshwe elugcinweni lamapolisa- bengazi ukuba le nto ithetha ukuthini yaye iza kubashiya kweyiphi imeko. Okubuhlungu, kukuba kukho imiphumo anokuhlala nayo umntu iminyaka emininzi xa ekhupha intlawulo yolwaphulo-mthetho.
Kucetyiswa ukuba umntu aqale athethe negqwetha ngaphambi kokuba akhuphe intlawulo yolwaphulo-mthetho.
Imeko kaMnu, Tong
Kule minyaka yakutshanje, iinkundla ziye zalungisa iimeko zokukhutshwa ngokungafanelekanga kwentlawulo yolwaphulo-mthetho. INkundla Ephakamileyo: Kwicandelo EliseNtshona Koloni iye yahlola umbandela kaMnu. Tong oye wabanjwa ngenxa yokubekwe ityala lokuba nentsangu. Ngemini awabanjwa ngayo wakhululwa wakhululwa elugcinweni lamapolisa emva kokuba uyise ekhuphe intlawulo yolwaphulo-mthetho. Uyise wafilisha namaphepha ukuze aqinisekise ukukhululwa konyana wakhe. UMnu.Tong akazange achazelwe ngeenkqubo zomthetho yaye amapolisa akazange amchazele nangeenkqubo ezilandelwa yinkundla. Yena wayecinga ukhululwe ngebheyile ibe uza kuphinda avele enkundleni kungekudala. Zange aqonde uyise uye wambhatalela intlawulo yolwaphulo-mthetho.
Emva kweminyaka emithathu wafumana umsebenzi eSouth Korea wokuba ngutitshala wesiNgesi. Xa wafaka isicelo sokufumana amaphepha-mvume okuya kwelinye ilizwe wafumanisa ukuba unengxelo yolwaphulo-mthetho egameni lakhe. Zange awanikwe lo maphepha-mvume waba ke akakwazi ukuya kwelinye ilizwe. Kwakhona, waba ngumntu ongakufanelekelanga ukuba angangutitshala. Intlawulo yolwaphulo-mthetho yaba nemiphumo ebuhlungu kuMnu. Tong. Uye wacela inkundla ukuba iwuhlole lo mba nothe kamva wabekelwa ecaleni yiNkundla Ephakamileyo.
Izinto ezintlanu omele uzazi
Ukuba wena okanye ilungu lentsapho yakho liye labanjwa yaye linikwe ithuba lokuba likhuphe intlawulo yolwaphulo-mthetho – nazi izinto ezintlanu omele uzikhumbule:
Nokuba ubanjiwe unawo amalungelo
La malungelo aquka neli
Lokuxelelwa ukuba unako ukuthi cwaka,
Lokukhululwa elugcinweni, ukuba utyholwa ngokwaphula umthetho, ukuba iinkqubo zobulungiswa ziyavuma,
Lokuxelelwa ukuba awunyanzelekanga ukulivuma ityala into leyo Ibiza kusetyenziswa njengobungqina nxamnye nawe,
Ukuxelelwa isizathu sokuvalelwa kwakho,
Ukucela naliphi igqwetha okanye uRhulumente akwabele igqwetha ukuba kukho ubungqina obunamandla bokuba uye waphathwa ngokungekho mthethweni, yaye
Ukuncokola nokutyelelwa liqabane lakho lomtshato okanye isithandwa sakho, iintsapho, ukukhetha umntu wonqulo oza komeleza okanye ugqirha.
Le ncwadana ayenzelwanga ukuchaza onke amalungelo umntu anawo xa ebanjwa, kodwa icacile into yokuba unelungelo lokuthi cwaka yaye awunakukwazi ukukhupha intlawulo yolwaphulo-mthetho.
Kucetyiswa ukuba uthethe negqwetha lakho kuqala ngaphambi kokuba usayine into enokwenza nentlawulo yolwaphulo-mthetho. Ufanele ungayikhuphi intlawulo yolwaphulo-mthetho kuba nje ufuna ukukhawuleza ukhululwe eluvalelweni. Eso sigqibo sikhawulezileyo sinokuba yinto efanelekileyo kodwa mayenziwe emva kokuba kufunwe icebiso kwigqwetha.
Umele uxelelwe intsingiselo yayo
Amapolisa afanele akulumkise ngemiphumo eye ibekho xa umntu eyikhupha intlawulo yolwaphulo-mthetho. Iinkundla ziye zagqiba kwelokuba umntu otyolwayo umele
Axelelwe ukuba, ngokukhupha le ntlawulo uya kujongwa njengomntu oye wagwetywa yinkundla,
Isigwebo salowo otyholwayo siya kuvela egameni lakhe njengengxelo yolwaphulo-mthetho,
Xa umntu eyikhupha intlawulo yolwaphulo-mthetho uvula amathuba okusebenzisa amalungelo akhe okuba:
v Ayokuyilwa enkundleni,
v Athethe nabantu abamtyholayo,
v Abize amangqina,
v Nokumelwa ligqwetha.
Nceda ukhumbule ukuba amapolisa awakwazi ukuthi kuwe khupha intlawulo yolwaphulo-mthetho kuqala ngaphambi kokuba akukhulule eluvalelweni. Ufanele unikwe ixesha lokuba ugqibe enoba uza kuyikhupha kusina na intlawulo yolwaphulo-mthetho. Le nto inokwenziwa emva kokuba ukhululwe.
Imali yebheyile yahlukile kiwntlawulo yolwaphulo-mthetho
Ukukhupha intlawulo yolwaphulo-mthetho ayikokuhlawula imali yebheyile. Nazi izinto ezibonisa umahluko phakathi kwezizinto zimbini.
Intlawulo yolwaphulo-mthetho ibonisa ukuba uye wagwetywa ngenxa yokwaphula umthetho. Le nto ibonisa ukuba lo mba uye wasingathwa wagqitywa ibe ecaleni kwegama lakho kuya kuvela ingxelo yokwaphula umthetho. Awuzukuyifumana imali oye wayihlawula yaye awuzukuvela phambi kwenkundla kwakhona.
Imali yebheyile ibonisa ukuba umcimbi wakho awugqitywanga yaye ujongwa ngengonetyala ude ube ufunyaniswe ukuba enetyala yaye akukho sigwebo usifumanayo. Usamele uvele enkundleni yaye uza kuyifumana kwakhona imali yakho ukuba uye wayenza imiqathango ehamba nebheyile.
Cinga ngemeko eza kubeka kuyo kwixesha elizayo
UMnu. Tong khange akwazi ukufumana amaphepha-mvume okuya kwelinye ilizwe yaye ebengekufanelekeli ukuba angaphinda asebenze njengotistshala. Iindawo osenokuqeshwa kuzo zisenokufuna ukwazi ukuba wakhe waphula umthetho waza wagwetywa. Le nto isenokukubeka kwimeko yokuba ungawufumani umsebenzi okanye yenze kube nzima ukuba uqeshwe. INkundla Kwicandelo Lasekuhlaleni EGauteng liye lathi: ‘‘Ingxelo yolwaphulo-mthetho iba ngumqobo kumathuba avelayo afana nokuqeshwa, ukuya kwezinye iindawo nakwezinye iinkalo zobomi’’
Ukuyikhupha intlawulo yolwaphulo-mthetho kusenokuyilimaza inkululeko yakho yokuya kwezinye iindawo nokukhetha umsebenzi owufunayo.